Ny Huawei Mate 40 no ho maodely farany nampiasa mpanodinana Kirin | Androidsis
Ny Huawei Mate 40 no ho maodely farany nampiasana processeur Kirin
Ignacio Sala | | Fitaovana Android, Huawei
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ireo mpikirakira ny orinasa Aziatika Huawei dia niatrika a fanoloana manan-danja amin'ilay Qualcomm tsitoha sy Samsung's Exynos. Saingy, rava daholo ny zava-drehetra tamin'ny volana Mey 2019, noraran'i Trump tsy hanao orinasa miaraka amin'ny orinasa Aziatika ny orinasa amerikana rehetra.
Google no orinasa voalohany voarohirohy amin'ity lafiny ity, satria tsy misy ny rafi-piasan'ny Android ao amin'ny famoahana Huawei manaraka, manery azy handefa, haingana sy mihazakazaka, ny kinova Android-ny azy, ny Android iray Izy io koa dia manana fivarotana manokana antsoina hoe App Gallery eo am-pelatanany.
Na izany aza, tsy nijanona teto ny olana ary indrisy ho an'ny Huawei dia niely izy mba hisy fiantraikany amin'ireo mpandamina azy. Herinandro vitsivitsy lasa izay, niresaka momba ny TSMC izahay, mpanamboatra fikirakirana lehibe indrindra eto an-tany, dia noterena hanaraka ny torolalan'ny governemanta amerikana, aza miasa amin'ny Huawei intsony. Tsarovy fa ny TSMC dia manamboatra ireo mpikirakira Kirin an'ny orinasa Aziatika, ankoatry ny an'ny Apple sy Qualcomm.
Farany, ity tsaho ity dia nohamafisin'i Huawei tamin'ny alàlan'ny lohan'ny fizarana mpanjifa Huawei, Yi Chengdong, izay nilaza fa ny Huawei Mate 40Izy io no ho maodely farany an'ity mpanamboatra ity hampiditra processeur avy amin'ny faritra Kirin noforonin'ny HiSilicon, fizarana iray an'ny Huawei.
HiSilicon dia namolavola ny processeur Kirin an'i Huawei tato anatin'ny taona vitsivitsy, saingy tsy niandraikitra ny famokarana. Ankehitriny rehefa noterena hijanona tsy hiara-miasa amin'ny Huawei ny TSMC, dia tsy manana mpanamboatra hafa manana traikefa mitovy amin'ny TSMC hanamboatra ireo mpikirakira azy.
Vahaolana iray ho an'i Huawei dia hamakivaky ny famokarana Samsung azy ireo, nefa na izany aza, tsy azo atao koa io safidy io. Inona ny vahaolana ananan'i Huawei? Ny vahaolana tokana dia ny fampiasana ny processeur MediaTek sy Speadrum, ny olana dia ny teknolojia ananan'ireo mpikirakira ireo dia efa antitra noho ny hitantsika ao amin'ny Kirin, Qualcomm ary Exynos, noho izany ny tombony, ny herinaratra ary ny fanjifana ny terminal-dry zareo dia tsy ho izany , tsy lavitra na dia lavitra aza, tsy misy hafa amin'ny terminal tao anatin'ny roa taona lasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Huawei Mate 40 no ho maodely farany nampiasana processeur Kirin
Ny Xiaomi Mi MIX 2S sy Mi MIX 3 dia manomboka mahazo ny fanavaozana MIUI 12 miorina
Poco F2 Pro 5G, unboxing sy ny fiheverana voalohany [VIDEO]